Tuesday March 22, 2016 - 16:23:13 in Wararka by Super Admin
Xasan Sheekh ayaa EU ku Wareejiyay dhul shacabka soomaaliyeed leeyihiin
Markii ugu horraysay ayaa la ogaaday in midowga Yurub uu gumeysi dadsan la damacsanyahay shacabka soomaaliyeed isagoo ka faa’iidaysanaya calooshood u shaqeystayaal ku magacaaban madaxda dalka!.
Saxafiga soomaaliyeed ee Jamaal Cismaan ayaa baahiyay Dukumiintiyo muujinaya in Ururka Midowga Yurub si lacag la’aan ah lagu siiyay dhul katirsan garoonka diyaaradaha caalamiga Muqdisho.
Dhulkan oo kaabiga ku haya Badweynta Hindiya ayuu Xasan Gurguurte ku wareejiyay Midowga Yurub isagoo aan wax shuruud ah ku xirin.
Arrinka la yaabka leh ayaa ah in Midowga Yurub ay durbadiiba qorsheeyeen in dhismayaal laga dhiso dhulka ay boobeen kadibna laga kireeyo shirkado shisheeye oo fadhigoodu yahay Xerada Xalane islamarkaana dadka soomaalida aysan wax shaqa ka qaban Karin shirkadahaasi.
Sida Ku cad warqadaha ay EU kula wareegtay dhulkaas waxaa mamnuuc ah in qof soomaali ah uu ka shaqeeyo xarumaha laga hirgelinayo garoonka diyaaradaha taasi bedelkeedna ay ka shaqeyn doonaan dad shisheeye ah.
"Qandaraasluhu mashaqeysiin karo qof heysta dhalasho soomaali ah ama isirkiisu yahay soomaali goobtaasna adeeg kama bixin karo” sidaasi waxay ku qorantahay dukumiintiyada ay saxiixday Qeybta adeegga dibadda Midowga Yurub.
Wariye Jamaal Cismaan wuxuu leeyahay taasi macnaheedu waxaa weeye in nadiifiye waardiye iyo shaqaale kale oo ka howlgeli doono dhulka midowga Yurub uu dhisayo aysan noqon Karin soomaali arrinkaasina mamnuuc yahay!.
Arrinta layaabka leh waxaa weeye isla Vedio-ga waxaa kasoo muuqanaya xasan Gurguurte oo dhulka ku wareejinaya Midowga Yurub islamarkaana sheegaya in dhulkan ay shaqa ka heli doonaan dad badan oo soomaali ah balse Midowga Yurub ayaa go’aan ku gaaray in qof soomaali ah uusan ka shaqeyn doonin dhismaha.
Warbixintan ay Faafisay shabakadda Dalsoor ee uu madaxda ka yahay saxafiga Jamaal Cusmaan waxay banaanka soo dhigaysaa heerka uu gaarsiisanyahay boobka lagu hayo kheyraadka soomaaliya iyo damaca gurrucan ee Ururka Midowga Yurub.
Sida ku cad nashqadda dhismaha laga yagleelayo garoonka diyaaradaha Muqdisho waa dhisme wayn oo ay dagi doonaan dhammaan shirkadaha reer galbeedka ah iyo safaaradaha shisheeye ee Muqdisho ku sugan, waxaana ku nasan kara dadka ajaanibta caddaanka ah maadaama uu kaabiga ku haayo badweynta India.
Garoonka diyaaradaha iyo dekadda caalamiga Muqdisho ayay dowladda Federaalka ku wareejisay shirkad ajnabi ah oo laga leeyahay wadanka Turkiga taasi oo 45% qaadata dhaqaalaha kasoo xarooda kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya.
Halkan ka degso Warbixinta
Ama Hoos Toos uga daawo